टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा हजार छक्का र हजार चौका हान्ने पहिलो खेलाडी बने युनिभर्स बोस’ क्रिस गेल ! – yuwa Awaj
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रबार 2
वेस्ट इन्डिजका विष्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले टी ट्वान्टी क्रिकेटमा एक हजार छक्का हानेका छन् । ‘युनिभर्स बोस’ को उपाधि पाएका गेल हजार छक्का हान्ने एक मात्र खेलाडी हुन्।
जारी आइपिएलको ५० औं खेलमा राजस्थान रोयल्सविरु’द्ध किंग्स इलेभन पन्जाबका गेलले ८ छक्का प्रहार गरेका छन्। उनले ६३ बल खेल्दै ८ चौकाको मद्दतमा ९९ रन बनाएका छन्। २०–२० क्रिकेटमा १ हजार छक्का प्र’हार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका उनले ४ सय ९ खेलबाट यो दुर्लभ कीर्तिमान बनाएका हुन्।
४१ वर्षीय गेलले सन २००६ मा न्युजिल्यान्ड विरु’द्ध टी–ट्वान्टीमा डेब्यु गरेका थिए। जारी आइपिएलमा खराब प्रदर्शनमा रहेको पन्जाब गेलको आगमनसँगै फर्ममा छ। पछिल्ला लगातार पाँच खेलमा जित निकालेको पन्जाबको यी सबै खेलमा गेल सहभागी हुँदै आएका छन्। रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरवि’रुद्धको ३१ औं खेलमा गेलले उत्कृष्ट अर्धशतकीय पारी खेल्दै ५३ रन बनाएका थिए।
त्यस क्रममा पनि उनले पाँच छक्का बनाएका थिए। त्यस्तै मुम्बईविरु’द्ध २, दिल्लीवि’रुद्ध २, हैदरावादवि’रुद्ध १ र कोलकतावि’रुद्ध त २९ बलमा ५१ रन बनाएका उनले पाँच वटा त छक्का मात्र हिर्काएका थिए। यसैगरी टी–२० मा दोस्रो सबैभन्दा बढी छक्का पिट्नेको सूचीको दोस्रो स्थानमा मुम्बईका काइरन पोलार्ड छन्।
पोलार्डले ६ सय ९० छक्का प्र’हार गरेका छन्। यसैगरी टी–२० खेलमा एक हजार चौका प्र’हार गर्नेमा समेत गेल एक्ला खेलाडी हुन्। चौकाको रेकर्डमा दोस्रोमा डेभिड वार्नर (९४५) र तेस्रोमा ब्रेन्डन म्याककुलम (९२४) छन्।
Prevबाउले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु: दुई भाई सिडियो, ४ भाई हाकिम…हेर्नुहोस् ।
Nextसधै बदाम खानुको यति धेरै अचम्मैको फाइदाहरु…हेर्नुहोस् ।
७.	मनाङेबारे बाबुराम : रत्नाकरलाई बाल्मिकी बन्न किन नदिने ? (10)